Mpamatsy milina granulator zezika voajanahary ambony sy mora vidy | YiZheng
Inona ny karazana granulator zezika voajanahary sy mpiorina vaovao?
ny Granulator zezika voajanahary karazana & fitambarana karazany vaovao dia fitaovana enti-miasa mahazatra ampiasaina amin'ny famokarana zezika mitambatra, zezika biolojika, zezika biolojika, zezika famotsorana voafehy, sns. Mety amin'ny famokarana mangatsiaka sy mafana be izy io ary mamokatra zezika mitambatra sy antonony ary ambany.
Ny maody miasa lehibe dia ny granulation lena mando. Amin'ny alàlan'ny rano na etona fatra isa, ny zezika fototra dia voatsabo simika tanteraka aorian'ny fipetrahana ao anaty varingarina. Eo ambanin'ny fepetra misy rano, ny fihodinan'ny varingarina dia ampiasaina hanamboarana ireo poti-javatra Miteraka hery manapotika mba hanangona ho lasa baolina.
Inona no ilana ilay granulator zezika zezika vaovao?
izany Granulator zezika voajanahary karazana & fitambarana karazany vaovao dia vokatra misy patanty vaovao novolavolain'ny orinasanay sy ny Ivotoerana fikarohana ny milina fambolena. Ny masinina dia tsy vitan'ny granulate karazana organika fotsiny, indrindra ho an'ny fitaovana fibre izay sarotra zahana amin'ny fitaovana mahazatra, toy ny mololo, ny sisa tavela amin'ny divay, ny sisa tavela amin'ny holatra, ny zava-mahadomelina, ny tain-biby sns. Ny granulation dia azo atao aorian'ny fermentation, ary izy io koa dia mety hahitana ny vokatra tsara kokoa amin'ny fanaovana varimbazaha amin'ny asidra sy fotaka ao an-tanàna.
Endri-javatra an'ny New Type Organic & Compound Fertilizer Granulator
Ny tahan'ny fananganana baolina dia hatramin'ny 70%, avo ny tanjaky ny baolina, misy fitaovana kely miverina, kely ny haben'ny fitaovana miverina, ary azo alaina indray ny pellet.
New Line Organic & Compound Fertilizer Granulation Production Line Eto izahay dia afaka manome anao
10,000-300,000 taonina / taona NPK tsipika famokarana zezika
Tsipika famokarana zezika 10.000-300.000 taonina / taona
10.000-300.000 taonina / taona maro ny tsipika famokarana zezika
10.000-300.000 taonina / taona dingana asidra amoniaka, tsipika famokarana zezika mitambatra ao Urea
10.000-200.000 taonina / taona zezika biby, fako ara-tsakafo, maloto ary ireo fitaovana fikojakojana fako biolojika hafa
Fampisehoana horonantsary Granulator karazana voajanahary sy fitambarana karazany vaovao
Safidy maodely voajanahary sy zezika karazana zezika vaovao
Teo aloha: Disc Organizer & Compound Granulator zezika
Manaraka: Masinina Granulator Zezika Organika & Compound Vaovao
Fampidirana Inona no ilana ny fanatanjahan-tena momba ny mari-pana indostrialy? • Angovo sy angovo: toby famokarana herinaratra, famokarana herinaratra fandrehitra fako, toby famokarana solika biomassa, fitaovana fanarenana hafanana indostrialy. • Famafazana metaly: rivotra mitsoka ny sinteria vovoka mineraly (milina sinter), famokarana jiro lafaoro (Furna ...